Me and My Husband – NOe
Category: Me and My Husband
Posted in He, Me and My Husband, NOeLeaveacomment
Posted on August 24, 2020 October 16, 2020 by admin
“တစ်မိုးအောက်တည်းမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲနေကြတဲ့အခါ”ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ညက ကထွင်းနဲ့ မိမိ စကားများကြတယ်။အဲဒီနေ့ကတည်းက ဒီနေ့ညနေထိ မိမိတို့ ၂ ယောက်မခေါ်မပြောဖြစ်ကြဘူး။ဒီလို ၃ ရက်လောက်ထိမခေါ်မပြောဖြစ်တာဟာ ၉ နှစ်တာအတွင်း ဒါဟာ ပထမဆုံးဖြစ်တယ်။(ရန်ဖြစ်ပြီးပြီးချင်းရော ၊ ကြားထဲမှာပါ ကထွင်းက သဘောထားကြီးစွာ လာလာခေါ်ပါသေးတယ်။မိမိက စိတ်မကြည်တာနဲ့မခေါ်မပြောဘဲ ခပ်ချေချေနေပစ်လိုက်တာ။ဘာစကားမှကိုအပြောမခံတာ။)ဒီ ၃ ရက်လုံး မိမိက အခန်းအောင်းတယ်။(စနေနေ့ကတော့ ကိစ္စရှိလို့ ညနေပိုင်းအပြင်တစ်ချက်ထွက်လိုက်သေးတယ်။)ကြာသပတေးနေ့က Ma Sandi ဝယ်လာပေးတဲ့ စပျစ်သီးတစ်ဗူးမှလွဲ၍ ဘာမှမစားဘဲ ရေသောက်ဗိုက်မှောက်နေပစ်တာ။(အခုတော့ မျက်ကွင်းဟောက်ပက်ဖြစ်နေ။)သူကတော့ တစ်ယောက်တည်း ထမင်းဟင်းချက်လိုက် ၊ အိမ်အလုပ်လုပ်လိုက် ၊ ရုံးကိစ္စတွေလုပ်လိုက်နဲ့ ယောက်ယက်ကိုခတ်လို့။မိမိက ဒီတစ်ပတ် စျေးလည်းမသွားတော့ သူ့ခမျာရှိတဲ့ အခြောက်အခြမ်းတွေချက်ပြုတ်စားသောက်ရတာပေါ့။မိမိကလည်း သူချက်ထားတာတွေ သွားမစားချင်။မာနကြီးတယ်။ မရဘူး။အာ့ ဒီညနေရောက်တော့ ဗိုက်အရမ်းဆာလာလို့ Food Panda က KFC မှာတာ ဘယ်လိုလို့ ၂ set မှာဖြစ်သွားလဲ မသိပါဘူး။Delivery ရောက်လာတော့ တစ်ယောက်တည်းလည်း ကြက်ကြော် ၄ တုံးမစားနိုင်တာနဲ့ “ကြက်ကြော်စားမလား?” ဆိုပြီး မေးရာက ပြန်ပြေလည်သွားကြလေသတည်းပေါ့။ဘာကိစ္စနဲ့ရန်ဖြစ်ကြလဲ? တောင်သေချာမမှတ်မိချင်တော့
သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ၂ ယောက်စလုံးအတွက်အကျိုးအမြတ်မရှိလှ။ပြေးကြည့်မှ ဒီ ၂ယောက်တည်းရှိကြတာရယ်။ဒီလိုမျိုး တစ်မိုးအောက်တည်းမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲနေကြရင် သူလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ ၊ ကိုယ်လည်း အစာမစားရ ။သူလည်းအဆင်မပြေ ၊ ကိုယ်လည်း ဗိုက်ဆာနဲ့ အဆင်မပြေလှဘူး။နောက်ဆို မိမိသတိထားရမယ်။အခုလို ရန်ဖြစ်ပြီး အခန်းတွင်းအောင်းရင်စားဖို့ ရိက္ခာတစ်ပတ်စာလောက် ဝယ်စုထားဦးမှပါလေ
ကထွင်း အရင်လို ပုံမှန် တရားပြန်ထိုင်နေတာ ၃ ရက်လောက်ရှိပြီ
ကထွင်း အရင်လို ပုံမှန် တရားပြန်ထိုင်နေတာ ၃ ရက်လောက်ရှိပြီ။မိမိနဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူကတစ်ရက်ကို အနည်းဆုံး ၁ နာရီတရားထိုင်နေကျ။သမီးရည်းစားတွေဖြစ်ကြပြီးနောက်ပိုင်း သူ့ကိုတရားမထိုင်ဖို့ မိမိ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။စိတ်ခံစားချက်(မရှိသလောက်)နည်းပြီး အေးစက်တည်ငြိမ်လွန်းတဲ့အပြင် အရာရာကိုအကျိုးအကြောင်းအမြဲဆင်ခြင်သုံးသပ်နေတတ်သူတစ်ယောက်ကို ရည်းစားတော်ရတာဟာ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်အရွယ် မိမိအတွက် အဆင်မပြေလှဘူးလေ။မိမိက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ၊ အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုပဲ အမြဲတောင့်တ မျှော်လင့်နေတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကို။မိမိ လက်တွဲဖော်ကိုလည်း မိမိလိုပဲ ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာ။ဒါပေမယ့် ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ဒီကြားထဲ သူတရားထိုင်မြဲပါပဲ။ဒါပေမယ့် အရင်လို အချိန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။အားရင် အားသလို ၊ အချိန်ရရင် ရသလို။အရင်ကလောက်တော့ အေးတိအေးစက်ကြီး မဟုတ်တော့ပေမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း ၊ အံ့ဩခြင်းတို့ကတော့ အခုထိ သူ့ဆီမှာ (မရှိသလောက်)တွေ့ရခဲနေဆဲ။ဥပမာသူ့ကို မွေးနေ့ Surprise တို့ဘာတို့ သွားလုပ်လို့မရ။ကိုယ်ဘယ်ဆိုင်က မွေးနေ့ကိတ်ဝယ်လာမလဲ ဆိုတာကအစသူတွက်ထားပြီးသား။
လွယ်လွယ်နဲ့ ဆေးထိုးလို့လည်းမရဘူး။ဟိုတစ်လောက မိမိသူငယ်ချင်းမတွေနဲ့ Night Out ထွက်တော့ သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ကသူ့ကိုနောက်ချင်တာနဲ့ ဖုန်းခေါ်ပြီး “ကထွင်းရေ နိုးတော့အရမ်းမူးနေပြီ။ဘာညာ” ဆိုပြီး ညှောင့်တော့ ဘသားချောက “အဲလိုဆိုလည်း အစ်မတို့အိမ်မှာပဲ သိပ်ထားလိုက်တော့” တဲ့။လေသံကပုံမှန်ပဲ။ အေးဆေးပဲ။ရယ်ရယ်မောမောပဲ။ စိတ်ပူခြင်း။ ဒေါသထွက်ခြင်းအလျဉ်းမရှိလို့ သူငယ်ချင်းမတွေက အံ့ဩယူရတယ်။“ဟဲ့ နင့်လင်တော်မောင်က ဘယ့်နှာကြီးလဲ” ပေါ့။ဒီရက်ပိုင်းမှာ မိမိတို့ ၂ ယောက်လုံး အလုပ်အရမ်းများပြီး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ အရမ်းပင်ပန်းကြတယ်။ကိုယ်ကျန်းမာရေးက အစားအသောက်အနေအထိုင်ဆင်ခြင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပေမယ့် စိတ်ကျန်းမာဖို့ကတော့ အချိန်လေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး ပုံမှန် တရားထိုင်မှကို အဆင်ပြေမယ့် အနေအထား။ပြောခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ။မိမိတို့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ဝက်သားနဲ့မျှစ်ချဉ်ချက်သလိုပဲ။ဝက်သားနဲ့မျှစ်ချဉ်ချက်တဲ့အခါ မီးငွေ့ငွေ့လေးနဲ့ အချိန်ကြာကြာတည်ထားရင် ဝက်သားမှာ မျှစ်ချဉ်အရသာကူးလာပြီး မျှစ်ချဉ်မှာဝက်သားအရသာစွဲသွားသလိုပေါ့။ကိုယ်တွေ ၂ ယောက်အတူနေတာကြာလာတဲ့အခါ သူဟာကိုယ်နဲ့တူလာပြီး ကိုယ်ဟာသူနဲ့တူလာတော့တာပဲ။(တစ်ခါတစ်လေတော့ ရန်ထထဖြစ်ကြ)
တကယ်တော့ မိမိဟာ ကလေးလိုချင်တာမှတစ်ပိုင်း( မကဘူး ၁၅ ပိုင်းလောက်တောင်)သေနေတာပါ
တကယ်တော့ မိမိဟာ ကလေးလိုချင်တာမှတစ်ပိုင်း( မကဘူး။၁၅ ပိုင်းလောက်တောင်)သေနေတာပါ။ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ်အသိဆုံး။ကလေးမယူခင် လုပ်စရာတွေကအများကြီးရှိနေသေးတာကိုး ။ဥပမာ – Master တန်းဝင်ခွင့် တစ်ခုခုအောင်ဖို့တို့။ဟိမဝန္တာဖက်ခရီးရှည်ထွက်ဖို့တို့။ပိုက်ဆံလည်း လောက်လောက် လားလားရှာချင်သေး။အလုပ်ကလည်း အခုမှ လုပ်မယ်ကြံကာရှိသေးကို။အိမ်ထောင်ပြုဖို့တောင် ၉ နှစ်လောက်အချိန်ယူခဲ့ရတာလေ။အခုလို ကိုယ့်အကြောင်းပြုပြီး လူဖြစ်လာမယ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လူ့လောကထဲခေါ်သွင်းဖို့ဆိုတာကတော့ တော်တော်ကြီး (မိမိအတွက်က)တော်တော်တာဝန်ကြီးတာမို့ အချိန်ယူသင့်တယ်လေနော် ။အခုမှ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာတောင် ၁ နှစ်မပြည့်သေးတာကို။ဒီတော့ပြောချင်တာက … ကလေးမမွေးမှာကို မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့။(မိမိလို သိုးမည်းတစ်ကောင် အနေနဲ့ ဒီလောက ကြီးကို အကောင်းဆုံး ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တာကလည်း ကလေးတွေကောင်းကောင်း မွေးပြီးထားခြင်းပါပဲ။
မွေးချိန်တန်ရင်မွေးမှာပါ။နည်းနည်းတော့ စိတ်ရှည်ရှည် စောင့်ကြပါဦးလို့နော်
Posted in Me and My Husband, NOeLeaveacomment
ယနေ့ အထူးစပယ်ရှယ် ငါးခေါင်းဟင်း
Posted on August 2, 2020 October 16, 2020 by admin
ငါးခေါင်းစားချင်လို့တာစူနေတာ ရက်ပေါင်း ၆ ထောင်လောက်တောင်ရှိတော့မယ်။
မအားတာရယ်။စားဖို့ အဖော်မရှိတာရယ်။(ယူထားတဲ့ လင်က “ငါးခေါင်းမစား၊အင်းစိန်သား”လေ
စားချင်တဲ့ငါးခေါင်းမတွေ့တာရယ်။ …. နဲ့ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။တစ်နေ့က သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်နဲ့စကားစပ်မိရင်းက “ငါးခေါင်းချက်ပါလား။စားချင်လို့” ဆိုလာတော့ ငနိုးတစ်ယောက် ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျဆိုသလို နှလုံးပီတိဂွမ်းဆီထိသို့ ပျော်ရွှင်သွားတာ။ဒီပိတ်ရက် ဖြစ်အောင်ချက်မယ်ပေါ့။မနေ့ကစျေးသွားတာနောက်ကျတော့ ဘာငါးခေါင်းမှမရလိုက်ဘူး။ဒီနေ့က နည်းနည်းစောစောသွားပေမယ့် ကိုယ်စားချင်တဲ့ ပင်လယ်ငါးခူခေါင်းမရှိဘူး။(မိမိအတွက်က ငါးခေါင်းတကာ့ငါးခေါင်းတွေထဲ ပင်လယ်ငါးခူခေါင်းသာ အကောင်းဆုံးပဲ)အစ်နေ့နဲ့ လပြည့်ညှပ်သွားတော့ အသား ငါးသည်တော်တော်ရှား။ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ စျေးနည်းနည်းပတ်လိုက်တော့ ငါးရောင်ခေါင်းတစ်ခေါင်းရတယ်။၅၀ သားကျော်၊ ၆၀ သားနီးပါး ပဲရှိတာဆိုတော့ တော်တော်သေးတယ်ပြောရမယ်။ငါးခေါင်းဟင်းချက်ရင် အနည်းဆုံး ၁ ပိဿာကျခေါင်းလောက်မှအဆင်ပြေတာ။နို့မို့ရင် စားလို့သိပ်မကောင်းချင်။ဒါပေမယ့်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့ သီတာစျေးမှာ ဒီခေါင်းအကြီးဆုံးပဲ။အာ့နဲ့ ကက္ကတစ်ခေါင်းတစ်ခေါင်းပါထပ်ဝယ်လိုက်တော့ အားလုံးပေါင်း ၈၀ သားကျော်ကျော်ဖြစ်သွား။နောက်ထပ် ပဲပြားကို ကြော်ပြီးရှောက်ရွက်ကလေးနဲ့ သုပ်မယ်။ကန်စွန်းရွက်ကြော်မယ်။ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေလှော်ထောင်းပြီးသံပုရာသီးညှစ်မယ်။ပူတီနာနဲ့ ပဲသီးပြုတ်တို့မယ်။ကဲ …. ငါးခေါင်းဟင်းတော့ ချက်ပြီးပြီ။အင်းစိန်သားနဲ့ရန်ဖြစ်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ် ။
Posted in Food, Me and My Husband, RecipeLeaveacomment
Posted in Me and My HusbandLeaveacomment